विद्यालय भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, तालुकदार निकाय मौन ! « News24 : Premium News Channel
विद्यालय भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, तालुकदार निकाय मौन !
मुगु, फागुन २८ । मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयका विद्यार्थी भवनमा अध्ययन गर्नै पाएका छैनन् । भूईंमै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यतामा परीक्षाको तयारी कसरी होला ? विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का दिएको पनि चार वर्ष भइसकेको छ । निर्माण अलपत्र परेपछि भूईमै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, विद्यार्थी ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकामा रहेको महादेव निम्न माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थी भूईंमै अध्ययन गर्न बाध्य बनेका छन् । निर्माण कम्पनी र विद्यालय प्रशासनको लापरवाहीका कारण कक्षा कोठा बन्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
२०७२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुले तीन कोठे भवन निर्माणका लागि १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको थियो । निर्माणाधिन अवस्थामै रहेको यो भवन यतिवेला शौचालयको रुपमा परिणत हुँदैछ । सिस्नु, झारपात उम्रेर भग्नावषेश जस्तो देखिन्छ ।
१ सय ७४ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने यो विद्यालयको अवस्थाले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई गिज्याइरहेको छ । नयाँ बन्न लागेको भवनको अवस्था भग्नावषेश बन्दै गएको मात्र होइन, पूराना भवन पनि भत्किन थालेका छन् । टेबुल, बेन्च, कुर्सी त विद्यार्थीहरुले देख्नै पाएका छैनन् । फोहोरमा बस्नुको पीडा त छदैछ, शिक्षकहरु पनि नियमित आउँदैनन् ।
विद्यालय भवन किन बनेन ? हाम्रो प्रश्नमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन् । प्रधानाध्यापक रामबहादुर सिंहले विद्यालय व्यवस्थापान समितिका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर बुढा र अभिभावकको कमजोरी भएको आरोप लगाएका छन् ।
तर, व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष बुढा हिसाब–किताब नगराउनु प्रधानाध्यापकको दोष भएको बताउँछन् । बुढाको कार्यकाल सकिएपछि न उनले हिसाब बुझाएका छन् न विद्यालयले हिसाब मागेको नै छ । नयाँ अध्यक्ष समेत चयन भएका छैनन् । कतिपयले भ्रष्टाचार भएकै कारण भवन निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
विद्यालय भवन निर्माणमा भएको लापरवाहीलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मुद्दा परेको छ । तालकुदार निकाय सोरु गाउँपालिकाले भने वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा पनि सरकार विरुद्ध प्रर्दशन
कुवेतबाट फर्किएका २ जनामा कोरोनाको आशंका, भक्तपुर क्वारेन्टाइनमा सजगता
म्याग्दीमा फेरि डेङ्गुका बिरामी भेटिए